Poara | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Fampiharana sy ny toetra mahasoa ny chlorophytum
Ao an-trano, dia tsy ampiasaina amin'ny tetika ara-pananahana fotsiny ny zavamaniry, fa amin'ny fampiasana azy. Noho izany, ny vilany tsotra dia toy ny fanadiovana tsara, fa ny chlorophytum ny tompon-tany amin'ny tombontsoa avy amin'ny tontolo iainana. Azontsika atao ny milaza fa ireo no voninkazo tsara indrindra ho an'ny trano izay manadio ny rivotra tsara kokoa noho ireo zavamaniry indostrialy hafa.
Ireo toro-làlana ambony momba ny fikarakarana sy fambolena vary varimbariana ao Lada ao an-jaridainany
Ny tsara tarehy, mavomavo na maitso, manankarena, voankazo matsiro dia efa noheverina ho iray amin'ireo voankazo tena mahafinaritra. Ny pear dia miteraka fahatsapana, ary ny pulpan'ny siramamy dia mandona ao am-bavanao. Misy karazam-bibikely maro be fantatra, fa iray amin'ny karazany malaza indrindra ny vary varimbazaha Lada. Androany isika dia hiresaka momba ireo karazam-pitomboana amin'ny fitomboan'ny karazana vary, momba ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny karazana vary.
Ny fomba hiatrehana ny bibikely dia mitondra boka
Ny vokatry ny voankazo rehetra dia vokatry ny fanafihan'ny pesta, ary ny boka dia tsy fahita firy. Aza mandray fitaovana hiarovana ireo hazo farafaharatsiny farafaharatsiny, satria ity dia mety hitarika ny fahafatesan'ny vokatra, fa ny hazo manontolo. Amin'io lafiny io, manontany tena ny mpikaroka vaovao momba ilay fanontaniana hoe: "Inona no bibikely mampidi-doza ary inona no tokony hampiasaina mba hahafahan'ny bibikely manary ny hazo?"
Varimbazaha varimbazaha "Nika": ny fitafy sy ny toetoetry ny fikarakarana
Ny voankazo tsara tarehy dia mitondra fahatsapana fihetsika haingana sy fahafinaretana amin'ny tsirony mahafinaritra ary manonitra aroma. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny karazana biriky "Nika", bebe kokoa ny momba ny hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Ny famaritana ny pear de class "Nika" Ny haben'ny hazo iray karazana "Nika" dia salan'isa, ary ny tahan'ny fitomboana dia ny salanisa.
Fomba hanamboarana biriky ho an'ny ririnina
Ny pear dia vokatra tena tsara sy mahasalama izay azo ampiasaina tsy amin'ny endriny voajanahary fotsiny na amin'ny endriky ny jams, jams, marmalades, voankazo, sns., Ary koa ho toy ny zava-manitra izay manome tsiron-tsakafo vaovao ho an'ny tsindrin-tsakafo sy salady, sakafo sy trondro. Misy karazana borosy maromaro azo atao tsara mandra-pahatongan'ny hatsiaka, saingy ny fanontaniana mikasika ny fomba tokony hijinjana ny biriky mandritra ny ririnina dia mbola manan-danja ho an'ny mpiasa an-trano.
Karazana fitsaboana ho an'ny fijinjana biriky ho an'ny ririnina
Ny fanandramana biriky ao amin'ny zaridaina dia manamarika ny faran'ny fahavaratra. Afaka mamonjy ampahany aminy ianao amin'ny fanomanana ity voankazo manitra ity amin'ny ririnina. Ny jiro, jirofo, marmelade, compotes, siropes ary voankazo voaangona, ary ny tsindrin-tsakafo natao amin'izy ireo, dia hampamirapiratra ny andro ririnina sy ny hariva. Pare jam resipes Ny ranom-boankazo ho an'ny ririnina dia miovaova amin'ny ririnina, ary saika efa voaomana daholo ny rehetra raha tsy misy fomba fitsaboana tsy misy fatra.
Ny tombony sy ny fahasimbana amin'ny fihinanana ny boka
Ny pearne dia nambolena nandritra ny telo arivo taona mahery. Any anaty ala dia mihamitombo manerana an'i Eorazia hatramin'ny 60 degre ambanin'ny avaratra. Ny mpahay siansa dia nahita foibem-pirahalahiana antonontonony roa teo aloha - Shina fahiny sy Azia Minora, saingy ny toerana izay namboarina voalohany dia tsy fantatra tsara. Ny tsiro mahafinaritra sy ny fahasalamana tsara dia nahatonga ny pearan'ny iray amin'ireo vokatra tena tiany indrindra (misy karazany mihoatra ny 5000).
Pear "Elena": ny fiheverana sy ny tsy fisian'ny vary, ny fambolena ary ny fikarakarana
Hatramin'ny fahiny, dia ny paozona no hazo malaza indrindra. Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hamboly pear ny karazana "Elena" tsy misy olana ary mankafy ireo voankazo matsiro. Ny karazam-bolo amin'ny karazana "Elena" Pear "Elena" dia karazana ririnina. Ity dia hazo fihinam-bary misy satroboninahitra piramida.
Tsidiho ny karazana varim-bazaha Kokinskaya
Ny pear dia malaza amin'ny zaridaina noho ny voankazo matsiro sy matsiro, tsy mendri-piderana amin'ny fambolena sy karazana varimbazaha. Ankehitriny dia misy karazany maro karazana vanim-potoana samihafa izay manohitra ny aretina sy ny toetr'andro - ny fanamafisana ny hafanana, ny vanim-potoana maina. Amin'ny iray amin'ireo karazana bitsika - resadresaka Kokinskoy ato amin'ity lahatsoratra ity.
Karazana vary varimbazaha: famaritana, endriky ny fambolena sy fiahiana
Ny bryn, ho an'ny ankamaroany, dia zavamaniry tsy mendrika izay tsy mitaky fikarakarana manokana na fitomboana mihamitombo. Misaotra an'ireo mpamboly ireo mpamboly maoderina manana fahafahana hameno ny tahirin-tsakany amin'ny hazo fihinam-boa miaraka amin'ireo karazana tsara indrindra ho an'ny fambolena amin'ny toetr'andro. Ny tantaran'ny karazam-bolo maniry "Voamarika" Ny karazana bikan'ny "Rogned" dia vokatry ny asa ataon'ny mpamboly Rosiana.
Pear children: famaritana ny karazana vary, fambolena sy fiahiana
Среди летних сортов груш самым ранним по праву считается груша Детская, которая к тому же отличается особенно сладким вкусом и хорошей урожайностью. По этой причине ниже мы подробно изучим особенности выращивания груши Детской, чтобы каждый садовод мог украсить ей свой участок. Ny tantaran'ny famoronana ny fahasamihafan'ny karazam-bolo Zana-tratra ny zaza voalohany amin'ny karazam-borona manintona ao amin'ny trano famakiam-boky rehetra Rosiana ao an-tanànan'i Moskoa, izay niompian'ireo mpamboly Y.
Ny torohevitra sy toro-hevitra tsara indrindra ho an'ny karazana varimbazaha alaharo Augustus dew
Androany, varimbazaha maro dia maro no voavolavola, toerana iray mendri-kaja izay misy ny volon'arabe Aogositra. Latsa-paka tamin'ny mpamboly izy noho ny tsy fisian'ny fieritreretana sy ny fijinjana be dia be. Inona koa ny ala maromaro antsoina hoe Augustus, toy ny hoe ny famaritana sy ny fitsipika fototra momba ny fikarakarana, dia faritantsika eto ambany. Pear Avgustovskaya dew: ny famaritana ny karazana varimbazaha Avgustovskaya dia natsangana tamin'ny taona 2002 noho ny fiampitana ireo karazana Tenderness sy Triumph Pakgam avy amin'ny mpizara malaza S.
Mampiavaka ny fahatsiarovana Zhegalov: ny fandrosoana sy ny fiheverana, indrindra ny fambolena sy fiahiana
Pears - tena matsiro, ary koa voankazo mahasalama. Avy amin'ireo karazana paoma mahazatra dia manavaka tsiro mahafinaritra sy fofona tsara. Matetika ny tanimboly sy ny faritra ambanivohitra no misy hazo apple kokoa noho ny hazo pira.Angamba izany dia noho ny karazana karazana varotra samihafa. Amin'ny ankapobeny, ireo karazana ireo dia somary mitovitovy.
Fitsipika ankapobeny sy toro-hevitra ho an'ny fanangonam-bazana amin'ny lohataona
Ny fambolena no dingana lehibe indrindra amin'ny fambolena pear. Raha mamokatra tsy ara-dalàna ny vokatra, dia hisy vokatra tsara mandritra ny fotoana lava, na, mety tsy hanantena ny tsy hijinja mihitsy. Ahoana no hisafidianana ny fotoana hambolena? Noho izany, ny fanontaniana voalohany dia miseho ho an'ny mpamboly iray izay te hamboly hazo: oviana no tsara kokoa ny manangona pears amin'ny lohataona?
Ahoana ny fomba handravana poti-bozaka amin'ny pesta
Matetika ny mpamboly dia miatrika aretina isan-karazany sy bibikely. Ny iray amin'izy ireo dia felam-bolo maneno, ary ny fomba hiatrehana izany, dia hilaza amin'ity lahatsoratra ity isika. Ahoana ny fomba fijerin'ny "fahavalo"? Ny haben'ny voka-pandrika dia kely ihany - ny halavan'ny olon-dehibe dia 0,18 mm fotsiny. Ny bibikely dia manana loko fotsy, izay amin'ny fisian'ny fararano dia nosoloana mavomavo na mavo mena.
Ahoana ny fomba hamonoana pesta amin'ny vay?
Ny fahasimban'ny fandroana fandroana dia mahazatra ny zaridaina rehetra izay misy zaridaina amin'ny karazana zaridaina rehetra. Tsy manimba ny endrik'ilay hazo fotsiny io aretina io fa manimba ny zavamaniry. Androany dia hiresaka momba ny fomba hanavahana ny harafesina amin'ny paozin'ny aretina hafa, mampidi-doza, ary ny fomba itondrana azy.
Ahoana no hanaisotra ny kankana amin'ny pears?
Iray amin'ireo bibikely mampidi-doza indrindra manjo ny mpamboly rehefa maniry ny hazo fihinam-boa ny karazana bibikely. Ity toeram-panafody ity dia afaka mitifitra ny faritra manontolo ao amin'ilay orinasa amin'ny fotoana fohy. Ny Pears dia mitaky fomba mahomby, mivantana ary, ny tena zava-dehibe, fomba fiasa mahasalama hiatrehana izany.
Ahoana no hambolena pears amin'ny lohataona: torolalana tsikelikely
Ny fananganana vatosokay iray dia fitaovana mahaliana ny zaridaina, miaraka amin'ny fanampiana izay ahafahanao manitatra ny zaridao sy ny sakafonao, dia azonao atao ny manala ny voankazo voavoatra avy amin'ny vatam-borona tsotra iray na hafa. Amin'ny farany dia mety ho liana fotsiny ny manandrana zavatra vaovao. Ny antony dia mety ho hafa, fa tsy maninona ny mandalina ny teoria, alohan'ny hanombohana ny fibodoan'ny mpamboly - fitsaboana.
Pearoa "Petrovskaya": ny famaritana, ny fambolena ary ny fiahiana, ny tombontsoa sy ny tsy fahampian-tsakafo
Ny karazam-bongy "Petrovskaya" no natolotry ny taona 1959 tamin'ny alalan'ny fiampitana hybrides. Ny hazo dia manana haavon-tsiran-doko sy elanelan'ny satroboninahitra, matevina sy malefaka ny hoditra. Ny sampana lehibe dia miorina eo amin'ny fitoeran'ny mason'ny ankamantatra. Ny sampana dia mivalona, ​​ny fisiany dia mahalana, ambony sy ambany. Fambolena voankazo - karazana mixed.
Fantatray amin'ny pear de grade "Krasulya"
"Krasulya" dia karazana varimbazaha maitso, malaza sy malala amin'ny mpamboly noho ny tsiron'ny voankazo sy ny fambolena amin'ny fambolena. Noho ny fahasamihafana amin'ny ririnina, ny poa dia mety mitombo ao amin'ny faritra misy toetr'andro mangatsiaka. Ny tantaran'ny karazam-bozaka "Krasulya" Pears "Krasulya" - ny vokatry ny asan'ny mpahay siansa ao amin'ny Ivotoerana Ural Scientific-Research South for Horticulture and Potato,
Fomba ahoana no ahafahana miala amin'ny biriky?
Ny pear dia hazo tsara tarehy izay afaka manasongadina ny zaridaina rehetra. Inona anefa no hatao raha sendra tampoka ny hazo malemy? Inona no mampidi-doza ary aiza no misy ny Scab - ny aretina fihinana foka mahazatra hita matetika amin'ny hazo misy ny toetr'andro. Ny mpitsabo ilay aretina dia ilay holatra mpangalatra Venturia pirina.
Cicadas - bibikely mihira: endri-piainana, sary
Tsiambaratelo amin'ny voatabia voatabia ao anaty trano fambolena vita amin'ny polycarbonate: ny dingana manontolo A hatramin'ny Z
Iza amin'ireo mpitondra fiovan'ny bateria no tsara kokoa
Bull miaraka amin'ny peratra: maninona no asaina izy io ary ahoana no atao
Ny zavamaniry ao amin'ny family cucurbine of the genus Cucumber, na ny melon
Ahoana no hambolena thuja amin'ny fahalavoana, indrindra ny fikarakarana
Mitobia amin'ny fikarakarana ny fahasalamantsika, na ny fanasitranana pelargonium
Tombontsoa sy fanatsarana kankana Kaliforniana
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Poara